Ọrụ ebube ọzọ nke Padre Pio: ọ gara ileta otu nwoke nọ n'ụlọ mkpọrọ | Ahụrụ m Jizọs n'anya
di Paolo Tescione - Machị 26, 2021
Ọzọ ọrụ ebube nke Padre Pio: akuko ohuru banyere onyinye onyinye nke bilocation. Linessdị nsọ nke ụkọchukwu Capuchin Francesco Forgione. Amụrụ na Pietrelcina, Italy, n'afọ 1885, ọ bụ onye ji ezi obi n'aka ọtụtụ ndị kwesịrị ntụkwasị obi. Ọbụna tupu "onyinye" nke akụkọ ntolite na akaebe na-ekwu na ọ bụ ya: stigmata, bilocation (ịnọ n'akụkụ abụọ n'otu oge).
Ike iguta ak onuche mgbe ige ha nti nkwupụta na ịrịọchitere arịrịọ n’ekpere ka Chineke gwọọ ndị mmadụ - ha bụ ndị maara nke ọma. John Paul nke Abụọ chiri ya eze na June 16, 2002. Kedu St. Pio nke Pietrelcina, onye ndi uka n’eme ememe ya na 23 Septemba.
Onye gbara ama gbara Padre Pio ajụjụ n'onwe ya
Andrea Tornielli na-ekwu na akwụkwọ ahụ nwere akụkọ banyere Angelo Battisti. Director nke Casa Alivio del Sufrimiento na typist maka Isi Obodo nke Vatican. Battisti bụ otu n'ime ndị akaebe na usoro iti ihe nke friar nsọ.
Ọrụ ebube ọzọ nke Padre Pio: Kadịnal ahụ József Mindszenty, achịbishọp nke Esztergom. Onye isi ala Hungary, ndị ọchịchị Kọmunist tụrụ ya mkpọrọ na Disemba 1948 wee maa ya ikpe ịga nga mkpụrụ ọka n'afọ na-eso ya.
E boro ya ebubo na ọ na-agba izu megide ọchịchị ndị ọchịchị. Ọ nọrọ n'ụlọ mkpọrọ ruo afọ asatọ, wee nọrọ n'ụlọ mkpọrọ, ruo mgbe a tọhapụrụ ya n'oge ọgba aghara a na-ewu ewu na 1956. Ọ gbagara naEmbasii nke United States na Budapest ruo 1973. Afọ nke Paul VI manyere ya ịpụ ma daa mbà. ya bishọp.
N'ime afọ ndị ahụ ụlọ mkpọrọ, Padre Pio pụtara na sel kadinal site bilocation.
“Mgbe ọ nọ n'ime San Giovanni Rotondo. Ndi Capuchin bu iburu stigmata gara weta Cardinal achicha na mmanya. Achọrọ ịgbanwe ka ọ ghọọ ahụ na ọbara Kraịst ... "
Akaebe na Saint nke Gargano
“Stigmata ga-akwado ịdị nsọ nke Padre Pio na njikọ ya na Cross Christ dị ka mkpụrụ obi aja maka ọdịmma ụwa. Akara ọbara na oke mgbu nke ọnya nke obi ebere nke Onye-nwe-aka, aka ya na akụkụ ya na-ekpughe ihe atụ nke njikọ kacha mma n'etiti mmadụ na Onye Nzọpụta ya. Dị ka St. Francis tupu lum, Padre Pio nwere mmasị na stigmata nihi na onye emikpuru onwe ya nime Kraist, ka o we gho onye ozo nke ozo, ya bu, “Kraist ozo”. Padre Pio yi stigmata maka afọ 50, rue mgbe ọ nwụrụ na Septemba 23, 1968. A na-agba stigmata ya ebe niile; ọbụnadị otu n’ime ndị dibia bekee zitere ka ọ nyochaa Nna ahụ site na Holy See, Amico Nignami, onye bụ onye anaghị ekwenye na Chukwu, mechara ghọta na ihere ya bụ ezigbo ya bụ onyinye si n’aka Chukwu ”.
Ekpere na St. Pio nke Pietralcina ịrịọ maka amara